Home Wararka Hir-Shabeelle oo maanta diiwaangelinaya musharixiinta u tartameysa HOP#024, HOP#106 & HOP#140
Hir-Shabeelle oo maanta diiwaangelinaya musharixiinta u tartameysa HOP#024, HOP#106 & HOP#140
Guddiga Hirgelinta Doorashooyinka Dadban Heer Dowlad-Goboleed ee SEIT Hir-Shabeelle ayaa maanta diiwaangelinaya Musharixiinta u tartameysa kuraasta kala ah HOP#024, HOP#106 & HOP#140 oo Magaalada Jowhar lagu dooranayo 9ka April 2022.
SEIT Hir-Shabeelle ayaa sidoo kale maanta xareynaya Ergada Dooraneysa saddexda Kursi ee uu shaaciyay Guddigaan, waxaa waqti kooban la tusinayaa sida uu Ergayga u dooran karo qofka uu ugu codeynayo in uu ku metalo Baarlamaanka 11aad ee JFS.
Jowhar waxaa ku sugan musharixiin u tagtay in ay ku tartamaan HOP#024, HOP#106 & HOP#140 maadaama SEIT Hir-Shabeelle uu ku dhawaaqay waqtiga ay dhaceyso Doorashada, Araaji qabashada, Diiwaangelinta.
HOP#024: Cabdulqaadir Carabow Ibraahim ayaa ku fadhiya kursigaan Baarlamaankii 10aad ee Soomaaliya, markale ayuu u xusul-duubayaa in uu ku guuleysto.
HOP#106: Mina Xasan Maxamed ayaa beesheeda ku metashay Baarlamaanka 10aad ee Dowladda Federaalka.
HOP#140: Cabdulqaadir Cosoble Cali ayaa xubin katirsan Baarlamaanka 9aad ee Soomaaliya ku ahaa kursigaan oo Dad badan isusoo taageen.
Dowlad-Goboleedyada Hir-Shabeelle & Jubbaland waxaa ku dhiman kuraas kamid ah Xildhibaannada Golaha Shacabka Baarlamaanka 11aad JFS, SEIT Hir-Shabeelle ayaa sheegay in kuraastaan ku harsan Dowlad-Goboleedkaas halka 16ka kursi ee Gedo taalla oo ilaa hadda aanay jirin xal ama go’aan laga gaaray ay harsan yihiin.
Previous articleJubaland oo taageertay go’aankii Rooble, eedeyna u jeedisay Francisco Madeira
Next articleRooble iyo saaxibadiisa oo dhaqaale ku bixinaya dagaal ka dhan ah Lafta Gareen
Farmaajo “..DFS talo kastaa waa ay qaadanaysaa laakiin marnaba ma ogolaanayso...